Mogadishu Journal » Munaasabad sagootin ah oo loo sameeyay xildhibaannada baarlamaanka Puntland’’Sawirro’’
Mjournal : — Munaasabad ballaaran oo lagu sagootinayay xildhibaannada baarlamaanka maamul gobolleedka Puntland ayaa habeenimdii xalay lagu qabtay xarunta madaxtooyada maamul gobolleedka Puntland, taasoo ay goob joog ka ahaayeen mas’uuliyiinta sar sare ee maamulka Puntland iyo waliba isimada, odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Puntland.
Mas’uuliyiinta ka qeyb-gashay munaasabada waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamul gobolleedka Puntland, guddoomiyaha baarlamaanka uu waqtigiisu dhamaaday C/rashiid Maxamed Xirsi, xubno ka tirsan golaha xukuumadda, isimmo, suugaan-yahan, culimaa’uddiin, haween, dhalinyaro iyo marti-sharaf kale oo badan.
Khubado kala duwan ayaa lag jeediyay munaasabada, iyadoo sidoo kalana lagu soo bandhigay suugaan kala duwan oo si guud loogu cabbirayey horumarka deegaannada Puntland iyo weliba waxqabadka xubnaha baarlamaanka ee la kala diray.
Garaad C/llaahi Cali Ciid oo ah afhayeenka isimada Puntland oo ka hadllay munaasabada ayaa wax badan ka sheekeeyayqiimaha ay midnimadu leedahay iyo weliba sida ay lagama maarmaan u tahay in nabadda iyo xasilloonida Puntland si wadajir ah looga shaqeeyo.
Ugu danbeytii madaxweyne C/raxmaan Faroole oo khudbad ka jeediyay musaabada ayaa mahad ballaaran u soo jeediyey xildhibaanada ku jirey baarlamaanka uu waqtigiisu dhamaaday, wuxuu dhinaca kale sheegay in xukuumadda uu hormuudka u yahay ay ballan qaadeyso in doorashada soo socotaa ay noqoto mid xor ah, si cadaaladi ku jirtana u dhacda.
Isimada iyo waxgaradka maamul gobolleedka Puntland ayaa looga fadhiyaa in ay soo xulaan baarlamaan badalli doona kan la kala dirray, si ay u soo doortaan mas’uuliyiinta hogaamin doonta Puntland marka la gaaro bisha January ee sanadka 2014-ka.